Isiphelo esiphakamileyo sekhabhathi yeKhitshi ebhulashiweyo I-Nickel itsalele ezantsi
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Tsala iiFaucets / I-WOWOW ephezulu ilinganiselweTsala ezantsi iimpompo zasekhitshini
I-Wowow ephezulu I-Rated Tola i-Faucets yeKhitshi enye
ikaliwe 4.98 Kwi-5 esekelwe kuyo 41 amanqaku umthengi
Le Khitshi Faucets yenziwa ngobhedu olucekeceke kunye nokuhlamba okukhokelayo. I-SUS304 inobuhlobo ngokusingqongileyo kwaye isempilweni, kwaye impilo yethu ixhomekeke kumlondolozi wethu. Iyakwazi ukuhlengahlengiswa ngokujikeleza okushushu nokubandayo, ukubuyisela indawo ngokulula, kulula ukuyifaka, yeklasikhi kunye nenhle, kwaye ilungele ukuhlanjwa kwegumbi lokuhlambela kunye nokuhombisa kwekhitshi
· I-nickel emileyo ebonakalayo
· Umgangatho ophezulu wokudonsa amanzi kwindawo yokuntywila
· Umnqweno ophum 'izandla wento enye
Imisebenzi emibini yamanzi
I-SKU: 2310301 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Tsala iiFaucets tags: Uqhekeze uNickel, Yehlisa, Iholide elilodwa
21.3 x 11.2 x 2.8 intshi
Siphinde sathatha indawo yompompo wekhitshi endala ndaza ndonwaba! Umyeni wam wachukumiseka kakhulu xa evula ibhokisi. Ufumene itampu epakishwe kumagwebu kwaye engaphazanyiswanga ngexesha lokuhambisa. Into elandelayo awayechukunyiswe yiyo yimigaqo yokufaka eyayicacile kwaye imfutshane. Yonke ingxaki enokubakho yayijongana nomenzi wale mveliso. Ukusuka kwicala elisezantsi ukuya kwiadaptha kunye neewasha ezazifakiwe. Ukufakwa kwakulula kwaye itephu yahamba okokuqala.
Kukho isiqhulo esibalekayo phakathi kwethu sokuba nayiphi na iprojekthi esiyithathayo ekufuneka ithathe iyure okanye ezimbini; izakusisa iintsuku ezi-2. Ayisiyiyo le yokuba sibe neengxaki ezininzi zokususa itompu endala xa kuthelekiswa ne-1/2 leyure ingaphantsi ukuyibeka kule!
Impompo elungileyo kakhulu, ngakumbi xa uninzi luyithanda lufuna imali eninzi kakhulu. Sasibambekile ngombhobho weplastikhi / wealuminium xa sasingena kwikhaya lethu elitsha. Yaphuma empompini kwaye simosha amanzi. Olu yayiluphuculo olukhulu lwengoma. Siphinde satshintsha indawo yentsimbi yevalve kuba oko kuvuza kwaye kwaqhubeka. Ukuba ubeka ecaleni le projekthi, ndingathi fumana le nto kuqala kwaye uzityhale uyenze. Awuyi kudana.
Andizithandi iiprojekthi zemibhobho yamanzi. Ngelishwa, kuye kwafuneka ndifake iimpompo ezingaphezulu (i-Moen, Delta, Pfister) kunokuba ndifuna ukukhumbula. Le WOWOW yeyona ilula endakha ndayenza. Endaweni yokuyifaka esinkini ngesiseko somqala esinzulu ezinye iibrands zibonelela, oku kusetyenziswa iscrew sokusetha ekulula kakhulu xa ufakwe kwikhabhathi engento yokukhanya nendawo. Imigca eshushu nebandayo yokubonelela ibhalwe ngokucacileyo ngokufaka iikhowudi, kunye namagama ashushu nabandayo. Njengebhonasi eyongezelelweyo, yeza ne-3/8 ″ ukuya kwi-1/2 ″ iadaptha endifuna ukuyidibanisa nevalve yokuvala. Oku kundigcinele uhambo oluya kwivenkile yehardware. Yeyona faucet ilungileyo yokufaka.
Ndayalela itepu okomzuzwana kwaye ndacinga ukuba ndiza kuyizama le nto kuba ibinoqoqosho kakhulu kunabanye endakha ndababona. Ewe bendinovalo oluncinci kuba ibingelogama likhulu kwaye senzelwe ukuba sihambe namagama amakhulu. Isebenza kakuhle kakhulu kwaye ndingayifaka kwaye oko kuthetha kakhulu (nzulu!). Imiyalelo ibingacacanga kum kodwa le ibingumzamo wam wokuqala kuyo nayiphi na into enje (enkosi ukulungela ugoogle kunye ne-youtube)! Kuye kwafuneka ndithenge izixhumi zonikezelo lwamanzi ukufikelela kunikezelo lwamanzi njengoko itepu yam yakudala yayinemigca yobhedu elukhuni ehla ivela kuyo kwaye le sele inelayini zonikezelo esele zixhunyiwe. Izandiso zazingaphantsi kwe- $ 10 kwivenkile enkulu yebhokisi yezixhobo. Ndiyithandile le ngoba ikwadibanisa ngcono nesinki yam yasekhitshini esemgangathweni njengoko ingakhazimli kakhulu kodwa ikhangeleka intsha kwaye icocekile. Yindibaniselwano entle yohlaziyo ngaphandle kokuthanda kakhulu. Ndiyakwazi ukufikelela kwiimbiza ezinkulu ngokulula kwaye, itepu ayinkulu kangako kangangokuba ayikhangeleki ndawo kwikhitshi lam elincinci. Swivels kakuhle / ngokutyibilikayo, ukutshiza okukhulu / umlambo, kulula ukutshintsha phakathi. Kukhulu, lixabiso elikhulu. Ndincoma kakhulu. (Khange ndibuyiselwe nangayiphi na indlela kolu hlaziyo kwaye andinabudlelane nenkampani. Ndihlala ndikrokrela uphononongo oluhlawulelweyo.)
Ngemali awukwazi ukubetha le faucet! Inempawu ezinazo iimpompo ezibiza kakhulu. Yonke le nkqubo kulula ukuyifaka. Ndiyayithanda iringi kunye nokujija okuqhotyoshelweyo ukuze uncamathisele itepu ukuze uzike kumgangatho. Amathumbu onke abhalwe igama kwaye abonakala enzima. Nje ukuba uncamathisele ubunzima ukutshiza kukhupha ngokulula kwaye kubuyela umva njengoko kufanelekile. Ukuphela kwento esebenzayo endiyibonayo liqhosha lokutshiza. Ineqhosha lohlobo lokutshintsha oluya kutshintsha phakathi komjelo oqhelekileyo, ukutshiza kunye nokudityaniswa kwesitshizi kunye nokusasaza. Olu tshintsho luhlobo lwefloppy kwaye luya kuphantse lutshintshele kwisiqingatha sokutshiza kunye nemowudi yokusasaza ngokuchukumisa isitshizi. Ixesha liza kuxela ukuba eli qhosha ligcine njani. Ndingacebisa le faucet!
Ndithengele le faucet unyana wam kunye nomolokazana wam ngesipho sokufudumeza indlu. Babenompompo omdala we-chrome ongenasitshizi (kwaye abanaso isitya sokuhlambela izitya). Ndiqale ndayalela imodeli yobhedu b / c bendicinga ukuba iya kudibana noko sele benayo. Baye bagqiba kwelokuba bafuna abamnyama endaweni yoko, ndiye ndabuya ubhedu kwivenkile yaseKohl yendawo yethu (kulula kakhulu!) Ndayalela emnyama. Makhe ndikuxelele - le faucet yibhombu! Uxinzelelo lwamanzi luyamangalisa kwaye isitshizi sisebenza ngcono kunayo nayiphi na enye endakha ndayisebenzisa, kwaye anditsho nokuba ikhangeleka intle kangakanani. Ndandisoyika uku-odola igama lophawu endingazange ndeva ngalo, kodwa ndingacebisa olu phawu kuye nakubani na okhangela itompu eqinileyo kodwa engabizi kakhulu. Umsebenzi omkhulu WOWOW !!!
Sinekhaya leModeli yePaki kwindawo yokutyelela eFlorida enesinki encinci ephindwe kabini. Itepu encinci esasinayo yayihlala inengxaki ukuba sifuna ukuhlamba nantoni na enkulu. Le faucet isebenza ngokugqibeleleyo.
Ndibeke inkwenkwezi ezintathu kufakelo kuba isiseko setephu sasinkulu kancinci kunomngxuma kwisinki yethu engenasici. Kwafuneka ndiyikhuphele ngaphandle ukuze ndenze banzi umngxuma. Andiqinisekanga ukuba umngxuma kwisinki yethu ubuncinci kunesiqhelo okanye ukuba isiseko setephu sasikhulu ngokungaqhelekanga ngobubanzi. Nje ukuba ndiyifakele umfazi wam uyayithanda. Yinto ebalulekileyo leyo !!! Kunene??
Ndiyayithanda itephu yam entsha! Ndenze ingxoxo malunga nokuba ukuthenga elinye ngexabiso eliphindwe kabini kwiDepho yasekhaya iya kuba yeyona ndlela “ikhuselekileyo” yokuhamba, kodwa ndinayo malunga nenyanga ngoku kwaye ndiyayithanda. Umgangatho olungileyo kwaye ujongeka njengangaphambili (kubiza kakhulu, igama lebrend) itepu.
Ndithenge ikhaya elitsha kunyaka ophelileyo kwaye umakhi ufake iipompo zokujonga ezisezantsi. Ndonwabile yindlela le faucet ijongeka ngayo kwaye isebenza ngayo. Ndingathi kuphela isikhalazo sam esincinci kukuba amanzi aphuma ngokunyanzela, kodwa ndiyaya ndisiba nokukhanya okulula xa ndivula. Kulula ukutshintsha ukusuka kumjelo ukuya kutshiza, andikasebenzisi iqhosha lokuphumla nangona lisebenza. Ndayifaka ngumntu ophetheyo kwaye wayengenangxaki ukuyifaka. Lixabiso elikhulu xa kuthelekiswa neDepho yasekhaya okanye iLowe njengoko kungekho nto kolu luhlu lwamaxabiso.
Ndinika iinkwenkwezi ezi-5 ukuza kuthi ga ngoku. Sinayo kuphela malunga neveki okanye njalo kwaye siyayithanda kude kube ngoku. Kwakulula kakhulu ukuyifaka kwaye ukugqitywa komnyama omnyama kuhamba kakuhle kunye neetafile zethu zegranite. Ngethuba elifutshane ebesinalo, sele iphumile itompu yethu yokugqibela sayithenga ngaphantsi konyaka ophelileyo. Umthengisi akazukuyenza kakuhle imveliso yabo. Kudala ndikhangela okwethutyana kwaye le ibonakala intle ngexabiso kwaye kubonakala ngathi inezinto ezintle ezinyanisekileyo. Njengoko benditshilo ukuba kuphela ziiveki ezimbalwa uninzi kodwa ziya kuhlaziya kamva kwaye ndiyathemba ukuba inengxelo entle!
Le tephu kufuneka ibe yeyona mfihlelo inkulu ehlabathini. Iphakama kakuhle, ijongeka kakuhle, isebenza kakuhle kwaye inexabiso elifanelekileyo. Sitshintshe i-junk yeplastiki kwi-RV yethu kwaye umfazi uyayithanda. Oku kuyakusebenza kakuhle nasendlwini.
Le faucet ilungile !! Ndingumfazi oneminyaka engama-22 kuye kwafuneka nditshintshe itompu yam egumbini lam ngoba eyam yangaphambili yaphuka. Andinawo amava ngokutshintsha iipompo okanye naluphi na uhlobo lombhobho, kodwa oku kwakulula kakhulu ukufaka. Ndibukele ividiyo ye-1 yemizuzu kwi-Youtube ngendlela yokufaka le fomet kwaye ndiyenzile kwimizuzu engaphantsi kwe-20. Kuza nemiyalelo, kodwa ndifumanise ukuba ividiyo kulula ukuba uyiqonde kwaye uyilandele. Ngoku ifakiwe, yomelele kakhulu ngaphandle kokuvuza kwaye uxinzelelo lwamanzi luyi-prefect. Ncoma kakhulu le faucet!
Ndonwabe kakhulu yile faucet. Kwakuxabiso elihle kangangokuba kwafuneka ndizame. Isitshizi samanzi siyarhoxa kakuhle kuya kufuneka ucofe endaweni efanelekileyo. Kodwa ndiyathanda ukuba ungayitshintsha ukusuka kwisitshizi esipheleleyo ukuya kwishawari yokutshiza kwaye xa uyinyusa unokhetho lokuqinisekisa ukuba isibambo sakho sinemvume yokungabethi i-windows sill okanye i-backsplash yakho. Sikwazile ukujika isiseko ke xa ndisebenzisa isiphatho asinakuze sibethe iwindow yam. Flexible kwaye kulula!
Wowu! Oku kungcono / kulula ukuyifaka kunokuba bendicinga. Isebenza ngokumangalisayo, inkqubo yofakelo yayimalunga neyure enye neyure. Ukuba awoyiki ukuba manzi ngokungcolileyo phantsi kwesinki, manenekazi onokuyenza. Gcina imali yakho ekuhlawuleni ingcali. Beka phantsi ezinye iingubo ezindala uthathe ixesha lakho kunye nemiyalelo onokuyifuna ioyile yokutshiza ukuze ukhulule ukubambelela ngokuqinileyo. Nangona kunjalo, umgangatho wale faucet ulifanele ixesha nemali yakho. Ndonwabile ngokukhetha kwam.
Elona candelo lilukhuni kuyo yonke le nkqubo yayikukususa itompu endala yekhitshi. Kwakukho nut encinci kakhulu eyayihluthwayo. Kwafuneka ndisebenzise i-basrench wrench ukuyisusa. Ndiyakholelwa ukuba ngubani owake wafaka loo faucet wasebenzisa isixhobo esingalunganga ukuqinisa loo bolt. Ngale faucet ndijije nje iwasha enkulu enjenge nut ngesandla siqinise kangangoko ndinako, emva koko ndayiphelisa ngokujija izikrufu ezintathu ngesidrive driver. Kukho imiyalelo yokubonisa ngcono indlela yokwenza.
Ke njengomrhwebi ndandithandabuza xa inkosikazi yam yathatha le faucet ukuba ifakwe ekhitshini lethu kuba enye andizange ndiyive ngophawu kwaye ezimbini zazingaphantsi kwe- $ 75 nto leyo ethetha ukuba uyayifaka kwenye iiveki ezimbini. Kodwa oku kwahlukile le mpompo yenziwe yomelele kwaye inyani ngokunyanisekileyo kunayo nayiphi na itephu endikhe ndayifumana okanye ndayifaka kwiminyaka elishumi elinesihlanu ndikwishishini lokulungisa imibhobho yamanzi baya kuthenga olu phawu kwakhona ukuzama ezinye iimpompo zabo ngaphandle
Ndiyayithanda le faucet. Intle kwaye iyasebenza kakhulu. Kumnandi ukwenza izitya nokupheka kodwa kwanokunika izityalo zam ibhafu ethambileyo kunye nokunkcenkceshela. Ndonwabile kakhulu yile faucet. Umthengisi wayemkhulu kwaye into ifike ngexesha elifanelekileyo kwaye ikwimeko entle. Ngokuqinisekileyo ndiza kuthenga kulo mthengisi kwakhona.
Ukuza kuthi ga ngoku yenziwe kanye le nto bendilindele ukuba ndiza kuyenza. Akukho kuvuza, kwaye akukho monakalo emva kokubethwa ngeembiza ngengozi kodwa bendinazo iinyanga ezimbalwa, ke oku ayilulo uvavanyo olupheleleyo lokuhlukunyezwa.
Ukufakwa bekuyinto encinci, iimpompo zihlala zinoluhlobo lokucaphukisa ukufakela njengoko ukufikelela kunqongophele, kodwa xa kuthelekiswa noyilo oludala olunezinto zokufaka zejanky ezifuna isikrufu esikhulu kwindawo encinci, le yayiyitoni elula. Ndikwazile ukuyifaka ngaphandle kwesibini sezandla.
Ndinayo le faucet ifakelwe ngesandla ukuze ndingabinakho ukuphawula ngokulula kofakelo kodwa ndingathi intle kwaye isebenza kakuhle. Kulula ukutshintshela phakathi kokutshiza kunye nokuhamba. Iqhosha lekhefu lisebenza kakuhle, kunye nophawu lokudiliza. Bendinombhobho ophantsi othe tye ngaphambili kwaye eli liphupha lizaliseka kum. Enye into endiyithandayo kukuba ungazalisa izikhongozeli ezide ngokulula. Ijongeka ngathi yeklasi kwaye yeyangoku kwaye inesiphelo esihle. Ndingacebisa kakhulu le faucet.
Ndigqibile ukufaka le nto kwaye intle kakhulu. Eli lixesha lam lokuqala ukutshintsha ipompo ngokwam kwaye kwandithatha ixesha elide ukuyikhupha endala emva koko kwayenza ukufaka entsha. Ndithe ndakukhupha endala, kwandithatha phantsi kwemizuzu esi-8 ukuyifakela le intsha kwaye namanzi asebenza ngayo. Inendawo enkulu yokumisa entloko ukuze ungafikeleli ukucima amanzi ukuba ufuna ukutsala intloko kwikhawuntara okanye into ethile.
Iyunithi yile nto ndiyifunayo ukuba ndibuyisele ipompo yam endala yekhitshi. Yimveliso enexabiso elikhulu xa kuthelekiswa nezinye iibrand kungasathethwa ke ngegama. Inkangeleko entle, eyakhiwe kakuhle kunye nofakelo kulula kakhulu. Ndinqwenela ukuba banokukhetha ukungachukumisi kwentloko. Ndithenge enye endaweni yesitshizi kwaye ndiyayithanda. Kulula kakhulu. Ndicinga ukuba olu hlobo loyilo lukhule kakhulu kwaye nokuba ayilogama legama, kufuneka lisebenze kakuhle. Ndiyincoma.
Ndiyayithanda! Ibonakala ngathi inkulu kwaye yenziwe kakuhle. Olona phuculo lukhulu kwinto ebendinayo ngaphambili. Ndiyayithanda indlela ekulula ngayo ukujikela ngapha nangapha kunye nokuba isitshizi sibuyela njani kwindawo ngokuzenzekelayo. Ukuthenga okuhle xa kuthelekiswa neebhokisi zevenkile ezithengisa ezi ngekhulu leedola okanye nangaphezulu. Kuba ibiziindleko eziphantsi kakhulu bendikwazi ukubonelela umntu ophatha ngesandla ukuyifaka. Ngaphandle koko ngendibephantsi kwesinki kangangeeyure! Hleka kakhulu.
Umbhobho wasekhaya kaMama waqala ukuvuza kwaye wayengafuni ukujongana nokutshintsha iwasha kunye nayo yonke loo nto. Ndiyifumene le yathatha indawo malunga nemizuzu engama-30. Uthathe imizuzu engama-20 ukukhupha endala, yike. Ukuza kuthi ga ngoku, iinyanga ezintathu kwaye isasebenza kakuhle. Ndafaka ngaphandle kweplate kumngxunya omnye kwaye ijongeka intle nge-IMO. Into ekuphela kwayo inesidibanisi esitsha esingama-3/8 se-waterline kwaye uninzi lwezivalo ezindala zi-1/2-ke jonga loo nto. Ngaphandle koko, ixabiso elikhulu kunye nemveliso enkulu.
Le tephu ilungile. Siyithengile kwigumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela, ukubuyisela itompu ebiza amaxesha ama-3 kangako kodwa yathatha iminyaka embalwa. Kwakulula kakhulu ukuyifaka kwaye ijongeka intle kwaye iyasebenza, unkosikazi wam ucebise ukuba siyibeke kwisinki yethu ephambili. Xa itepu yethu entsha yokuntywila isinki iphela siyakuthatha enye yezi, hayi i $ 490. enye (olunye uphawu) olukhoyo ngoku. Siyayithanda, iWOWOW Faucet.
Kuthengwe le faucet njengendawo yokubamba isiphatho esivuzayo esi-2 ebesisebenza naso. Le intle! Ijongeka ngathi ziziphelo eziphezulu onokuzithenga kwivenkile yehardware kodwa ngeqhezu lexabiso. Umyeni wam uyifakile. Sasinombandela omncinci xa sifaka, kodwa ndicinga ukuba ibingumcimbi wokuntywila owawusonjululwa ngokulula xa umyeni wam wayecheba iinkuni ezazisendleleni nokugcina itepu ingqiniswa ngokupheleleyo. Unelisekile ngokupheleleyo ngokuthenga.
Le tephu yayiyimpepho yokufaka. Isebenza kakuhle, kwaye ndiyasithanda isitayile. Isambatho esimnyama sihombile kwaye siyasichasa ukuprinta- endiyithandayo kuba bendinexhala lokuba iya kubonisa yonke into encinci. Ekuphela kwento endinqwenela ukuba le faucet ibinemagnethi okanye into efana nokunceda ukutsala itompu ibuyele endaweni yakuba ugqibile emva kokusebenzisa umbhobho wokutshiza. Ingena endaweni yayo ilungile kodwa kuya kufuneka uyiphathe ngesandla. Itephu ilungelelanise kakuhle ukuhla nokubuya kumjelo wokutshiza kuthi ukuza kuthi ga ngoku. Khange ibenayo nayiphi na imicimbi evuzayo enjengokuba abanye begqabaze ngayo kuhlolo (olufakelwe kwinyanga ephelileyo). Sinoxinzelelo olungcono ngale faucet kunale yethu yokugqibela ngokunjalo. Khange silisebenzise uphawu “lokuphumla” - kubonakala ngathi akunantsingiselo xa unokucima amanzi ngokulula, kodwa mhlawumbi abanye bakufumanisa kuluncedo. Lilonke, intengo enkulu.
Imveliso ifike ngokukhawuleza. Ndiyifakile yiRoto-Rooter kuba indlu yam ineminyaka engama-23 ubudala kwaye ndifuna nayiphi na imiba ephathelene nemibhobho ephethwe ziingcali. Kuvela ukuba umbhobho wemibhobho uneyona tephu inye. Ebendixelela ukuba wonelisekile ngayo. Kwiintsuku ezimbalwa besizisebenzisa ndivumelana ngokupheleleyo naye. Sanelisekile nathi. Ndiyayincoma le nto ukuba ufuna uhlaziyo olukhulu olunezinto ezintle.
Yithande! Impompo endala eyayihleli iminyaka ye-OMG, ekugqibeleni yahluleka! Ndijonge le ndlela kwaye ndazi ukuba ndiyayifuna.
Ndiyikhethile le kwaye ndonwabile nge-100%. Isebenza ngokulula, umsebenzi wokutshiza unamandla kwaye umsebenzi oqhelekileyo ugqibelele. Elona candelo lilibi kuyo yonke loo nto yayikukudala kuphume elinye, amantongomane amakhulu abhityileyo ayenomhlwa ngendlela eyoyikekayo, kwaye akwindawo engenakwenzeka!
Impompo entle ngokwenene. Umgangatho olungileyo. Ndingalindela ukuhlawula ngaphezulu kwenye yevenkile ezinkulu zokuphucula amakhaya. Ndonwabe kakhulu ngale nto ndiyithengileyo. Ukugxekwa kuphela endinako kukuqinisekisa ukuba intloko ibekwe kanye kanye xa uyitsale phantsi. Ayizenzekeli kwindawo yayo efanelekileyo ngaphandle kohlengahlengiso oluncinci. Leyo yinkxalabo encinci.
Uxinzelelo lwamanzi lulungile. Inokhetho olufanelekileyo lokutshiza kunye nokumisa ikhefu.
Yenziwe yomelela. Kulula ngokwenene ukuyifaka. Sinezinye ezininzi ezingafakwanga okanye zisuse ngokulula kwaye apho kukho intlungu enkulu yokusebenza nayo. Le iye yaba yeyona ilula. Ndimangalisiwe yindlela entle kwaye yomelele ngayo. Iqhosha lokutshintsha phakathi kwemisebenzi eyahlukeneyo yamanzi lukhululekile. Ndingayithanda kancinci ukuze ingatyibiliki phakathi kwemisebenzi emibini yamanzi ngokulula. Kodwa iyonke, ilungile.
Ndandifuna ngamandla itompu entsha njengoko itepu yam yasekhitshini eneminyaka eli-12 ubudala yagqiba kwelokuba yayilixesha lokudropa kodwa okubi yayikukuntywila phantsi kwesinki. Ndabiza indoda ephathekayo kwaye ukuqeshwa kwakhe okulandelayo okuvulekileyo kwaba kwiintsuku ezi-4. Andililo ingcali koompompo ngoko ke ndaya kwi-WOWOW ndayalela le faucet kuba yayinophononongo olukhulu kwaye ngelishwa ayibizi. WOWOW uqaphele ukuba izakufika ekhayeni lam ngeentsuku ezimbini kwaye yenzekile. Ndonwabe kakhulu ngale nto ndiyithengileyo.
Le faucet ithathe indawo yombhobho wokuqala wokutsala isitshizi. Ndibotshiwe ukubuyisela isitshizi seplastiki kunye namathumbu xa beqala ukuvuza. Le nickel intsha ibrashiweyo itsalela phantsi ijongeka ngathi yeyangoku kwaye intle kwisinki yethu yentsimbi esinkini! Bekulungele ukufaka. Ngapha kwesikhokelo sam, abantwana bam abaneminyaka emi-2, 15 ubudala bathathe indawo yombhobho ngokwabo. Andikwazi ukukhasa phantsi kokunuka ngokungathi bendifudula ndikwazi ukuya kwi-LOL Elona candelo linzima yayikukhupha itompu endala ...
Ukuza kuthi ga ngoku, ndonwabe kakhulu ngale ntengo kwaye ngokuqinisekileyo ndingacebisa!
Ndiyifakile le faucet ekhitshini lam! Umfazi wam wayibona kwaye wayithanda. Siza kujonga indlu yefama kwaye yile nto kanye besifuna ukuyifaka ngokulula awudingi nemiyalelo. Andisiyondoda iluncedo kodwa ndiyifumene !!! Undithathe imizuzu engama-30 ukuyikhupha endala uyifakele entsha !!! Ndingayithenga enye ukuba ndiyayifuna !!! Ukuhambisa ngokukhawuleza nako
Kwakufuneka ndibuyisele umpompo wam wasekhitshini waseMoen. Wayengazange wayithenga itepu ngaphambili kwaye wamangaliswa yindleko! Ndifumene i-WOWOW kwaye ixabiso lalilungile ndaye ndadubula. Ijongeka imangalisa, isebenza ngokugqibeleleyo kwaye ndicinga ukuba uxinzelelo lwam lwamanzi lungcono. Umhlobo endandimfakile wayengenangxaki kwaphela.
Isitayile esinomtsalane setampu kwaye kulula kakhulu ukuyifaka ukuyenza ngokwakho. Kwafuneka ndiyinqumle itompu yam indala ngesixhobo esijikelezayo njengoko unxibelelwano lwalonakele. Indibano entsha ihambe ngokulula kakhulu kuba unxibelelwano olwenziweyo belulungiswe kakuhle kwaye lwacingwa. Ndicebisa kakhulu le nto kuye nabani na onomdla wokutshintsha itephu yabo yasekhitshini.
Le itephu entle elingana ngokugqibeleleyo ekhitshini lam. Ndiyithengile njengendawo yokutshintsha itompu eneminyaka eyi-13 ubudala. Ukufakwa kwakukhangeleka kulula, kodwa kuye kwafuneka ukuba ndimise iplamba yam ukuze ndiyifake ngenxa yokungafikeleleki kunye nobunzima bokususa itompu endala. Uthe uchukumisekile kwaye ufake nabanye bolu hlobo. Andikwazi ukuthetha ngokuzinza njengoko bendikhe ndayifaka, kodwa kukuphuculwa okuqinisekileyo.
Umgangatho ophezulu, onke amalungu abhalwe ngononophelo kunxibelelwano kunye nendibano elula. Ibholiti enkulu eyongezelelweyo - esetyenziswe ngaphantsi kwesinki (ukukhusela itompu esinkini) iphuculwe kakhulu ngaphezulu kweebholtshi ezindala- kulula ukuyifaka ngesandla kunye nokuqhuba umqhubi. Le yipompo yokuqala yasekhitshini endiyifakileyo; ke, ukuba ndingayifaka ngokulula le nto, nabani na angakwazi
Siyifakile le faucet iiveki ezimbalwa ngoku kwaye isebenza ngokugqibeleleyo. khange sibe nayo incasa evuzayo okanye embi okanye ukungcolisa njengolunye uphononongo olubi. Umyeni wam wayifaka malunga nemizuzu engama-30. Ijongeka kwaye iziva ikumgangatho ophezulu kwaye ibilixabiso elihle xa kuthelekiswa namanye. Ndonwabile ukuba ndiyithengile le! Ndingacebisa!
It is a itipu enkulu ngexabiso. Ndisebenzise ezinye iifompo ezibiza kakhulu kwixa elidlulileyo, kodwa le isebenza ngokulinganayo! Ihlangabezana neemfuno zam ngokupheleleyo. Uxinzelelo lwamanzi ekhitshini lam lubhetele kakhulu kuba sitshintshe itompu endala. Ndicebisa kakhulu ukuba le indleko isebenze ngaphandle kokuba ujonge imodeli yedeluxe eya kuthi ibe ngama-3 okanye ama-4 kumaxabiso.
Ndinemicimbi yokufaka kodwa kungenxa yokuba isinki yam yenziwe gwenxa. Emva kokuba ingxaki ilungisiwe yayilula! Itephu yam entsha intle kwaye intle! Ndonwabile ukuba nepompo ende kwaye akusafuneki ndisebenzise iikomityi ukugcwalisa iipani zam ezinde ngamanzi. Inqaku lokukhupha likhulu kakhulu!
Le faucet ingaphezulu kwe- $ 200 kwidepho yasekhaya kunye ne-menards! Enkosi ngokundongela imali engaka !!
Oku kwathengwa njengophuculo lokulungiswa kwam ekhitshini, endaweni ye-20 + yo faetet. njengokuphakama ukuze ugcwalise imbiza enkulu kwaye uyicoce. ukuba nomjelo kunye nomsebenzi wokutshiza konke ukodwa ngokuchukumisa iqhosha kuyinto entle, ukugqitywa kwentsimbi engenasici ekugqibeni kuyinto entle necocekileyo. Ixabiso elikhulu ngexabiso.